Finit 4.0: yakapusa imwe nzira kune systemd uye SysV init | Linux Vakapindwa muropa
SysV init Yakave iri system yanga ichibatanidzwa neLinux kubva pakutanga, uye ichibatanidzwa nenyika yeUnix, kunyangwe vamwe vakaita seBSD (uye kunyangwe mamwe ma distros) vakashandisa zvavo. Zvakare, kwave nekuve nekumwe kuitiswa senge Ubuntu's Upstar. Nekusvika kweiyo systemd zvese zvakachinja, uye mazhinji ma distros akaigamuchira, ichiva yakasarudzika system, kunze kwemamwe ma distros saDevuan anoramba achishandisa SysV. Zvakanaka, ikozvino kwauya Finit, kuita sarudzo kunyanyisa kuomarara ...
Sezvaunoziva, vazhinji vakagamuchira systemd hapana dambudziko, asi kuchine naysayers vachiri kusarudza SysV init kana vamwe. Zvino, Finit inouya seyakareruka kutsiva kune ese SysV init uye systemd. Uye neiyo Finit 4.0 vhezheni, iwe unozogona kunakidzwa nekumwe kuvandudzwa kunoita kuti itonyanya kunakidza seimwe sarudzo yeiyi.
Finit inouya kubva Kurumidza Init, uye yakavakirwa paSysV init, uye yakagadzirwa kuti ikurumidze uye kureruka sekuratidzwa kwezita. Pamusoro pekuita nekugadzirisa zvinyorwa zvekutanga, zvakare ine maitiro ekutarisa akafanana neiyo runit daemon. Uye, hongu, inosanganisirwa musina kupinda muGNU / Linux distros, yakanyatsogadzirirwa vashoma vashoma.
Inoshanda zvizere kune ese server uye desktop. Izvo zvakare inokwanisa tanga masevhisi mukufanana, kuongorora uye otomatiki kutangazve izvo zvinokundikana, zvinopa kurerukirwa kukuru kwekushandisa, ine yakapfava yekumisikidza faira, nezvimwe.
Kana iri iyo Finit 4.0 vhezheni, iyo nhau dzakabatanidzwa Ndizvo:
Pakutanga rutsigiro rwegroups v2.
Chimbo chakatangazve chakamisikidzwa chakatsiviwa nechimiro chekufananidzira kune initctl, sehama dzayo: kumisa, poweroff, kudzima, kumisa.
Kubviswa kwakavakirwa-mukati inetd super server. Kana iwe uchida kuita uku, shandisa yekunze inetd, senge xinetd, panzvimbo.
Mitemo yebasa inoshanduka kubva ku , iyo iri nyore kunzwisisa.
Tsigiro yeSysV yekutanga / yekumira zvinyorwa uye kuongorora kwebasa rebazi.
Kudzoreredzwa kwe dbus daemon kuburitsa kune syslog.
initctl, pasina nharo kana sarudzo, izvozvi zvinokanganisa kune runyorwa rwemasevhisi.
Para tora ruzivo rwakadzama, unogona kutarisa iyo webhusaiti yepamutemo yeprojekti Pedzisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Finit 4.0: yakapusa imwe nzira kune systemd uye SysV init
Kodi 19.1 inosvika ichiruramisa madhiri ekutanga eMatrix, ayo asiri mashoma nekuti iwo mutsva mutsva